Kamban-drongony vita ambongadiny ho an'ny kiraro vita amin'ny famokarana sy mpamatsy | INPVC
Fanamarinana: RoHS, REACH, FDA, PAHS
PVC, Polyvinyl Chloride dia polymer thermoplastic izay be mpampiasa amin'ny tsindrona faladian'ny kiraro. Ny Solon'ny PVC dia vita amin'ny alàlan'ny fizotran'ny tsindrona mivantana nefa azo atao toy ny tabilao vita amin'ny micro-cellular PVC izay calendared sy tapaka. Izy io dia manana fanoherana tsara sy malefaka miaraka amina vidiny manintona. Ny faladian'ny PVC dia misy koa insulate sy fanoherana tsara. Izy ireo dia mahomby ary koa mifandimby amin'ny hoditra.
Miaraka amin'ny fianarana sy famokarana traikefa amin'ny indostrian'ny fitaovana PVC nandritra ny 28 taona mahery, INPVC no malaza indrindra Kamban-kazo tokana ao amin'ny PVC Mpamatsy sy mpanondrana, manolotra habe mitovy amin'ny sombintsombiny izahay mba hiantohana ny fampisehoana azo antoka sy mamirapiratra.
Ny natolotray Kamban-kazo tokana ao amin'ny PVC dia be mpampiasa amin'ny famokarana kiraro & kiraro, kapaoty, kapa kiraro, baoty, faladian-jaza, sns. Mety ho azonao mora foana ity Polyvinyl Chloride Sole Compound ity miaraka amin'ny naoty hafa.
Izahay dia manana karazana kamban-tsolika manaraka ireto ho an'ny kiraro amin'ny kiraro:
* Granules PVC amin'ny famolahana tsindrona insoles & outsoles mifatotra
* Granules PVC amin'ny famolahana tsindrona foamed insoles & outsoles
* Granules PVC amin'ny famolavolana tsindrona "matevina ambany dia ambany" mihosin-javatra insoles & outsoles (solon'ny sol an'ny PU foamed)
INPVC dia manolotra karazan-java-manambatra virijiny 100% amin'ny viriosy kiraro ary famokarana ambony. Ny kiraro mifangaro miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanavaozana ary ny fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy.
hakitroky 1.18-1.35 g / cm3
Fampiharana Solosa kiraro sy baoty, faladia kiraro mangarahara, faladianao sela sela, faladia azo ampitahaina
Tapakila kiraro fahavaratra, kiraro ivelany, kapa kiraron'akanjo, faladian'ny kiraro,
Tapakila vita amin'ny ronono, faladian'ny miaramila, faladian'ny ranonorana, faladia Floaters,
Solon'ny kiraro fiarovana, faladian'ny kiraro an-tsekoly, faladian'ny kiraro lamba
Mateza. Mahazo aina. Manaova fanoherana. tsy-taratasy kely
Multi miloko, loko mamirapiratra
Matt Finish ary maina ny fahatsapana
Mifanaraka amin'ny hoditra, lamba ary fitaovana hafa
Kilasy fifandraisana amin'ny sakafo
Kilasy Antistatic sy Conductive
Ao amin'ny orinasa mpanamboatra kiraro tokana ve ianao? Te hanana kiraro an-kiraro PVC amin'ny loko tsara tarehy, lanja maivana, naoty avo lenta ary fanaingoana hafa, hahazoana antoka ny faharetan'ilay kiraro irery?
INPVC, iray amin'ireo mpanamboatra fitokisana kiraro vita amin'ny kiraro an-tsokosoko PVC any Shina, dia nanarona anao.
Manaraka: PVC Granules dia mitambatra tsindrona tsindrona ho an'ny kiraro